Baydhabo Wafdi uu hogaaminayo Ku-xigeenka Wakiilka gaarka ah ee Qaramada Midoobay u qaabilsan Soomaaliya Raisedon Zenenga iyo saraakiil kale ayaa gaaray magaalada Baydhabo ee xarunta Gobolka Baay, halkaasi oo uu kulan kula qaatay Ku-simaha Madahaweynaha Koonfur Galbeed Maxamed Xasan Fiqi iyo Wasiirada Wasaaradaha Magacaaban ee Amniga iyo Qorsheynta.
Kulanka ayaa waxaa looga hadlay arrimaha Amniga iyo Xaaladaha ka soo cusboonaadey Gobolka Shabeelaha Hoose, isla markaana diiradda lagu saaray sidii arrimahaasi loo xalin lahaa.
Wafdiga ayaa intaasi kaddib waxaa uu kormeeray xarunta Qeybta 60aad ee looga arrimiyo ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliya, halkaasi oo si diiran ay uga soo dhaweeyeen Taliyaha Qeybta 60aad Jenaraal Ibraahim Yaraw iyo Abaanduulaha Qeybta Ismaaciil Khaliif Shire.
Wafdiga ayaa soo indho indheeyay mashaariicyo kala duwan oo dawladda Boqortooyada Ingiriiska ay ka hirgelisay Taliska qeybta kuwaas oo Dhismahooda meel gabagaba ah maraya, Dhismooyinka oo isku gujira Xafiisyo, Cisbitaalka ciidanka, Qolal Jiif ah, Hool aad u weyn oo looga talagalay xafladaha ciidanka, shirarka iyo weliba goob lagu cilad bixinayo Gaadiidka Ciidanka.
Wafdigan ka socday Qaramada Midoobay iyo saraakiil kale oo ka tirsan ciidamada UK ayaa sheegay inay ka qeyb qaadan doonaan sidii loo xoojin lahaa tababbarada ay siinayaan ciidamada Xoogga dalka.